KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fante Faroese Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Luvale Macedonian Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Maya Mingrelian Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tswana Turkish Turkmen Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Sɛ Obi Yɛ Yehowa Danseni a, Obetumi Agyae Anaa?
Aane. Obi betumi afa akwan mmienu yi so afi yɛn som no mu:
Obetumi de n’ano aka anaa wakyerɛw. Sɛ obi si gyinae sɛ ɔmpɛ sɛ ɔyɛ Yehowa Danseni bio a, obetumi de n’ano aka ho asɛm anaa wɔakyerɛw krataa abrɛ yɛn.
Obetumi de ne nneyɛe akyerɛ. Obi betumi ayɛ biribi de akyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔyɛ Yehowa Danseni bio. (1 Petro 5:9) Sɛ nhwɛso no, obetumi akɔ asɔre foforo, na wakyerɛ sɛ ɔbɛkɔ so ne wɔn asom.​—1 Yohane 2:19.
Na sɛ obi gyae asafo nhyiam anaa asɛnkakɔ nso ɛ? Mubu saa nipa no sɛ wagyae mo som no anaa?
Dabi, yemmu no saa. Ɛsono sɛ obi bɛka sɛ watwe ne ho anaa ɔmpɛ sɛ ɔyɛ Yehowa Danseni bio, ɛnna ɛsono sɛ ne gyidi ayɛ mmerɛw. Ebinom wɔ hɔ a ahokeka a wɔde som Onyankopɔn no ano abrɛ ase. Ebi nso tumi gyae Onyankopɔn som. Nanso, mpɛn pii no, wobɛhwɛ na wɔn abam na abu, ɛnyɛ sɛ wɔmpɛ sɛ wɔyɛ Yehowa Adansefo bio. Enti sɛ anka yebeyi saafo no baako ahyɛ wɔn nsa no, yɛbɔ mmɔden kyekye wɔn werɛ, na yɛboa wɔn. (1 Tesalonikafo 5:14; Yuda 22) Sɛ onii no hia mmoa a, asafo mu mpanyimfo bedi anim aboa no ma wasan agyina ne nan so.​—Galatifo 6:1; 1 Petro 5:1-3.
Nanso, mpanyimfo no nni hokwan sɛ wɔhyɛ obi sɛ ɔnkɔ so ara nyɛ Yehowa Danseni. Sɛ obi ne yɛn bɛsom oo, sɛ ɔne yɛn rensom oo, ɛyɛ ɔno ara asɛm. (Yosua 24:15) Yɛn de, yegye di sɛ, ɛnsɛ sɛ wɔhyɛ obiara ma ɔsom Onyankopɔn, mmom ɛsɛ sɛ obiara fi ne koma mu yɛ saa.​—Dwom 110:3; Mateo 22:37.
Ɛtɔ da a, ehia sɛ wotu obi fi asafo no mu, na etumi boa no ma ɔsan ba asafo no mu bio.
Ɛtɔ da a, nkurɔfo ka sɛ Yehowa Adansefo tetew mmusua mu. Nanso, ɛyɛ ampa sɛ Yehowa Adansefo tetew mmusua mu anaa?
Share Share Sɛ Obi Yɛ Yehowa Danseni a, Obetumi Agyae Anaa?